PowerInbox: Qalab Dhamaystiran oo Shaqsiyeed, Iswada, Madal Fariimaha Multichannel | Martech Zone
Sida suuqleyda, waxaan ognahay in kaqeybgalinta dhagaystayaasha saxda ah fariinta saxda ah kanaalka saxda ah ay muhiim tahay, laakiin sidoo kale aad iyo aad u adag. Iyada oo leh wadiiqooyin iyo barnaamijyo fara badan - laga bilaabo warbaahinta bulshada illaa warbaahinta soo jireenka ah - way adag tahay in la ogaado halka lagu maalgelin karo dadaalkaaga. Iyo, dabcan, waqtigu waa kheyraad kooban - had iyo jeer waxaa jira waxyaabo badan oo la sameeyo (ama aad sameyn karto), marka loo eego waqtiga iyo shaqaaluhu inay sameeyaan.
Daabacayaasha dijitaalka ah waxay dareemayaan cadaadiskan laga yaabo inay ka badan yihiin warshadaha kale, laga bilaabo wargeysyada dhaqameed ilaa boggaga wax lagu qoro, qaab nololeedka iyo niche, daabacadaha xiisaha gaarka ah leh. Kalsoonida lagu qabo warbaahinta dhulka gilgishay, iyo waxa u muuqda gazillion warbaahino kala duwan oo dhammaantood ku tartamaya dareenka macaamiisha, ku haynta dhagaystayaasha ku hawlan maaha kaliya mudnaanta-waa arrin badbaado.
Sida suuqleydu ogyihiin, daabacayaashu waxay kuxiran yihiin xayeysiinta si ay u ilaaliyaan laydhadhka iyo server-yada. Waxaan sidoo kale ognahay in helitaanka xayeysiintaas horteeda dhagaystayaasha saxda ah ay muhiim u tahay wadista dakhliga. Laakiin maadaama cookies-ka saddexaad ay noqdaan kuwo duugoobay, bartilmaameedka dhagaystayaasha ayaa noqday xitaa caqabad ka weyn.
Macaamiisha maanta waxay leeyihiin rajo aad u sareysa oo shakhsi ahaaneed ah - dhab ahaantii, ku dhowaad 3 ka mid ah 4 ayaa leh ma hawl geli doonaan oo leh waxyaabaha suuq geynta ah mooyee haddii aysan u habeysnayn dantooda. Taasi waa walaac weyn oo loo qabo daabacayaasha iyo suuqleyda labadaba - la kulanka in heerka sare uu si isa soo taraysa u sii adkaanayo maaddaama walaacyada asturnaanta xogta ay ku dhacayaan heerar sare oo shaqsiyeed. Waxay umuuqataa in dhamaanteen lagu qabtay Qabashada 22!
Mashruuca PowerInbox ayaa xaliya asturnaanta / shakhsi ahaaneed ee shakhsiga ah loogu talagalay daabacayaasha, iyaga oo u oggolaanaya inay u diraan farriimo otomatik ah, shaqsi ahaan macaamiisha macaamiisha emailka, websaydhka, iyo ogeysiisyada riixa-kanaalka oo si buuxda u doorta. Iyada oo la adeegsanayo PowerInbox, daabacaad kasta oo cabir ah waxay u diri kartaa waxyaabaha saxda ah qofka saxda ah kanaalka saxda ah si ay uga jawaab celiso.
Shakhsiyeynta Mawduuca Ku-saleysan Emailka
Waa tan sida ay u shaqeyso: Marka hore, PowerInbox wuxuu adeegsadaa cinwaanka iimaylka macaamiisha - maahan cookies - si loogu aqoonsado dhammaan kanaallada. Maxaa email loogu dirayaa?
Waa iska-gal, marka isticmaaleyaashu way isdiiwaan galiyaan / oggolaadaan inay helaan waxyaabaha, si ka duwan cookies-ka ka shaqeeya daaha gadaashiisa.
Waa mid joogto ah sababtoo ah waxay kuxirantahay qof dhab ah, ma aha qalab. Kukiyada ayaa lagu keydiyaa aaladda, taas oo micnaheedu yahay daabacayaashu ma oga in ay isla isticmaalaha yihiin marka ay ka tagayaan isticmaalka iPhone-ka illaa laptop-kooda. E-mayl ahaan, PowerInbox ayaa la socon kara hab-dhaqanka isticmaaleyaasha aaladaha iyo kanaallada oo dhan isla markaana beegsan kara waxyaabaha ku habboon si habboon.
Way ka saxsan tahay. Sababtoo ah cinwaannada emaylka si dhif ah looma wadaago, xogtu waa mid gaar u ah shakhsigaas, halka kukiyada ay ka ururiyaan xogta qof kasta oo adeegsada aaladdaas. Marka, haddii qoysku wadaago kiniin ama laptop, tusaale ahaan, macluumaadka cookie-ku waa qashin qasan oo hooyo, aabbe, iyo carruurba leh, taas oo ka dhigaysa bartilmaameedku mid aan macquul ahayn. Iyada oo emayl ahaan, xogtu si toos ah uguxirantahay shaqsiga adeegsada.
Mar haddii PowerInbox ay aqoonsato macmiil, mashiinkeeda AI ayaa markaa barto in danaha adeegsadayaasha ku saleysan dookhyada iyo habdhaqanka la yaqaan ee lagu dhisayo astaanta adeegsadaha saxda ah. Dhanka kale, xalka ayaa sidoo kale riixaya nuxurka daabacayaasha si ay ula jaan qaadaan waxyaabaha ku habboon ee isticmaalayaasha iyadoo lagu saleynayo astaamaha iyo dhacdooyinka waqtiga dhabta ah.
PowerInbox ayaa markaa si otomaatig ah ugu gudbisa waxyaabahaas la soo koobay isticmaaleyaasha adoo adeegsanaya emaylka websaydhka ama ogeysiis riix ah oo ku saleysan kanaalka muujiyey inuu wado hawlgelinta ugu sarreysa. Maaddaama ay madashu shaqeyneyso, waxay si joogto ah u sifeyneysaa soo-celinta waxyaabaha ku jira waxayna si joogto ah u cusbooneysiineysaa tusaalaha shakhsiyeynta sii kordheysa.
Sababtoo ah mawduucu waa mid aad u khuseeya oo faa'iido leh, macaamiishu waxay u badan tahay inay riixaan, wadista kaqeybgalka iyo dakhliga daabacaadda 'macluumaadka lacagta. Xitaa ka sii wanaagsan, PowerInbox waxay bixisaa xulasho lacageed oo la dhisay, taas oo u oggolaanaysa daabacayaasha inay si toos ah u geliyaan waxyaabaha xayeysiiska ah emaylladooda isla markaana riixaan ogeysiisyada.
Barnaamishka dejisan-iyo-iska illow-fudaydku wuxuu u oggolaanayaa madbacadaha inay dhagaystayaasha ku sii hayaan ku-mashquulinta waxyaabaha si shaqsiyan ah loo daaweyn karo miisaanka kasta ha ahaadee - wax aan sidaas u ahayn wax aan macquul ahayn iyada oo aan la isticmaalin qalabka iswada ee PowerInbox. Iyo, maxaa yeelay galinta xayeysiiska ayaa si otomaatig ah u dhacda, waxay ka badbaadineysaa daabacayaasha waqti aad u badan qaabeynta iyo ka ganacsiga tahriibka. Xitaa waxay la midoobeysaa Maareeyaha Xayeysiiska Google, taasoo u oggolaanaysa daabacayaasha inay si toos ah uga soo saaraan xayeysiiska hal-abuurka kaydka tooska ah ee jira ee jira iyadoo aaney jirin dadaal.
Maxay Suuqyayaashu U Daryeelayaan?
Barxadda PowerInbox waa inay ku jirtaa radar suuqleyda laba sababood awgood:
Dhab ahaantii nooc kasta waa daabacaad maalmahan, oo u qaybinaya waxyaabaha ku jira barta, dhiirrigelinta emaylka iyo ogeysiisyada riixaya macaamiisha. Suuqgeyaashu waxay sidoo kale hirgelin karaan barmaamijka PowerInbox si ay u maareeyaan shakhsi ahaanta iyo qaybinta waxyaabo badan, iyo xitaa lacag-sameynta. Noocyadu waxay ku dhejin karaan xayeysiisyada lammaanaha ah emaylladooda ama waxay ku ridi karaan talooyinkooda soo-saarka ah ee "xayeysiis" ah emaylladooda macaamil, iyagoo soo jeedinaya qaar ka mid ah galoofyada wanaagsan si ay ula socdaan kabahaas cusub, tusaale ahaan.
Ku xayeysiinta daabacayaasha dhijitaalka ah adoo adeegsanaya barnaamijka 'PowerInbox platform' ayaa ah fursad weyn oo aad astaantaada u hor dhigi karto dhagaystayaal aad u bartilmaameedsan oo ku hawlan. Xitaa kahor faafida, 2/3 ee macaamiisha waxay yiraahdeen waxay gujinayaan xayeysiiska joornaalka emaylka. Lixdii bilood ee la soo dhaafay, PowerInbox wuxuu arkay 38% kororka emaylka oo furan, taas oo macnaheedu yahay ka qayb qaadashada emaylka ayaa cirka isku sii shareeraya. Iyo 70% isticmaaleyaashu waxay horeyba ugu qoreen riix farriimaha, sidaas darteed waxaa jira karti weyn halkaas, sidoo kale.
Maaddaama dhagaystayaashu ay wax badan ka filayaan suuqleyda marka la eego shakhsi ahaanta iyo waxyaabaha la soo koobay, barnaamijyada sida PowerInbox waxay bixiyaan AI iyo otomatiga noo oggolaan kara inaan ku guuleysano heerarka sare ee miisaanka. Iyo, adoo siinaya dhagaystayaasheena in badan oo ka mid ah waxa ay doonayaan, waxaan dhisi karnaa xiriir xoogan, oo ku lug leh oo dhaqaajinaya daacadnimada iyo dakhliga.
Hel PowerInbox Demo
Tags: shaqsiyeynta emaylkamadal fariinfarriin badanboostada